Thwebula Kate Mobile 20 – Vessoft
Thwebula Kate Mobile
Kate Mobile – a uyashesha ukusebenzisa lokusebenza ukuxhumana in the yokuxhumana VKontakte. Isofthiwe ungabahlukanisa isibalo saso esikhulu izici ewusizo ukuqinisekisa ukuhlala ukhululekile inethiwekhi. Kate Hambayo ihlukaniswe yaba izingxenye eziningana, lapho kwamathebhu main asezindaweni umyalelo ukhululekile ukusebenza nge yokuxhumana. Phakathi izici eziyinhloko isofthiwe kukhona wokusindisa amarekhodi audio kumemori isilondolozi, search ethuthukisiwe kokuqukethwe kwabezindaba, izilungiselelo isaziso nezimo, ukuvumelanisa of othintana njll Kate Ucingo isekela umsebenzi akhawunti amaningi futhi ngokushesha sekuqalile phakathi kwabo. Futhi Kate Ucingo kwenza ukuze wenze usayizi wefonti and interface.
Ijubane eliphezulu and lula
Isethi elikhulu ukusebenza
Sebenza nge-akhawunti amaningi
Kwamukeleke Advanced of the ifonti esibonakalayo
Amazwana on Kate Mobile:
Kate Mobile Ahlobene software: